Piaggio P-180 Avanti FS2004 - Rikoooo
Dị na 14 textures! Eme nnọọ na 3D nsụgharị. Ụda nke engines propellers ndị kemmasi.
The Piaggio P180 Avanti bụ a ejima-engine ahịa ugboelu wuru na Italy site Piaggio Aero, ndi-isi-engineer bụ Alessandro Mazzoni. Jide iri na otu ụwa ihe ndekọ nke na-agba, ọ ga-enye a nso nke 1300 amụ ka kilomita (2400 km), a ọsọ kacha 398 mara akpụ (738 km / h) na a kacha cruising elu nke 12,500 m.
Onye edemede: Mario Noriega
Aero Ọchịagha AC 500 Ibu FS2004